Sivana kabine fiara
Sivana fantsom-pahombiazana avo lenta
Sivana voalohany momba ny tontonana
Fitaovana sy fanjifana efitrano fidiovana
Vovonana sivana fanofana FFU
Ny fonon-tànana misy latsa dia karazana fonon-tànana izay tsy mitovy amin'ny fonon-tanana mahazatra ary voahodina avy amin'ny lateks. Azo ampiasaina amin'ny orinasa, indostria, fitsaboana, hatsarana ary indostria hafa. Izy io dia lahatsoratra miaro ny tanana ilaina. Ny fonon-tanana vita amin'ny latex dia vita amin'ny lateks voajanahary sy additives tsara hafa ....Hamaky bebe kokoa »
Fitsipika filtration an'ny landihazo sivana rivotra
Fotoana fandefasana: Sep-22-2021
Tsy ilaina intsony ny milaza izany, fantatsika rehetra fa ny fitsipiky ny landihazo sivana rivotra dia ny manasiaka sy misambotra vovoka vovoka amin'ny rivotra amin'ny fomba mahomby mba hahatratrarana ny vokatra sivana iray manontolo, fa io dia tsy takatrao fotsiny momba ny velaran'ny landihazo sivana amin'ny rivotra. Androany no hanazavana ny fitsipika sivana ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Sep-15-2021
Amin'ny ankapobeny, ny cartridge sivana tadiavintsika dia matetika ampiasaina hanivanana entona, izay antsoina hoe cartridge sivana rivotra (izay antsoina hoe cartridge filter). Ny varingarina dia an'ny singa iray amin'ny sivana ambonimbony, izay mampiasa ny sela bitika azo tsofinaina miforona eo ambonin'ny vatan'ny sivana mba ...Hamaky bebe kokoa »
Car Car Filter
Fotoana fandefasana: Sep-08-2021
Rehefa mandeha miaraka amin'ny rivotra ny fiara dia ilaina ny mitsoka rivotra ivelany ao anaty efitrano, fa ny rivotra kosa dia misy poti-javatra maro samihafa, toy ny vovoka, vovobony, soot, koba fikosoham-bary, ozonina, fofona, oksida azota, dioksida solifara , gazy karbonika, benzène sns ... Raha misy ...Hamaky bebe kokoa »
Sivana boaty fanary azo ampiasaina
Ny sivana boaty fanary azo ampiasaina dia mety indrindra amin'ny sivana amin'ny savaivony μ M-kilasy. Ny fitaovana sivana dia vita amin'ny lamba tsy misy tenona avo lenta sy fibre synthetic amin'ny alàlan'ny fibre polyester manokana na import polyester. Ny endrika aforitra miendrika wedge dia ampiasaina hampitomboana ny fil ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Aug-25-2021
Ny fandroana an'habakabaka dia fantatra ihany koa amin'ny hoe fandroana rivotra, fandroana rivotra madio, fandroana rivotra madio, fandroana rivotra, fandroana rivotra, fandroana rivotra, varavarana fandroana rivotra, efitrano fandroana fandroana, fandroana rivotra, fantsona fandroana rivotra ary fandroana rivotra. Ny efitrano fandroana rivotra no fantsona ilaina hidirana amin'ny efitrano madio, izay afaka mampihena ny fandotoana c ...Hamaky bebe kokoa »
Amin'ny ankapobeny ny FFU dia manondro ny vondrona sivana mpankafy, izay fitaovana fanivanana famatsiana rivotra mandeha ho azy ary fitaovana famatsian-drivotra farany modular misy vokany fanivanana. Fitaovana sivana mpankafy FFU dia azo ampiasaina amin'ny fifandraisana maodely. Fitaovana sivana mpankafy FFU dia be mpampiasa ao amin'ny efitrano tsy misy vovoka, console tsy misy vovoka, vokatra tsy misy vovoka ...Hamaky bebe kokoa »
Boaty HEPA Ny famoahana rivotra avo lenta (HEPA BOX) dia sivana faran'izay tsara ho an'ny rafitra fanadiovan-drivotra fanadiovan-drivotra 1000, 10000 ary 100000, izay azo ampiasaina betsaka amin'ny rafitra fanadiovan-drivotra fanadiovana amin'ny fitsaboana, fahasalamana, elektronika, indostria simika ary hafa indostria. Avo e ...Hamaky bebe kokoa »
Fotoana fandefasana: Aug-05-2021
Ny efijery fanivanana karbaona navitrika dia mandray tantely tantely, tantely plastika ary tantely taratasy misy rafitra lavadrano ho mpitatitra. Raha ampitahaina amin'ny sivana karbona nentim-paharazana nentim-paharazana, dia manana fahombiazan'ny aerodynamika tsara kokoa, hakitroky kely kely, velarana midadasika manokana, adsor avo ...Hamaky bebe kokoa »
sivana rivotra paosy
Ny sivana kitapom-batsy dia ampiasaina matetika amin'ny rivotra ivoho sy ny rafitra famatsian-drivotra afovoany, ary azo ampiasaina amin'ny fanivanana antonony ny rafitra fanamafisam-peo mba hiarovana ny sivana ambany amin'ny rafitra sy ny rafitra. Amin'ny toerana misy ny fepetra takiana amin'ny rivotra madio ...Hamaky bebe kokoa »
Ny sivana HEPA Ny sivana rivotra avo lenta (HEPA) dia teknolojia malaza amin'ny fanadiovana ny rivotra. Ny sivana HEPA mahazatra dia afaka mandray 99.7% amin'ireo sombintsombiny miantona miaraka amin'ny haben'ny 0.3 micron (0,3 micron no habe sarotra indrindra hanivana), fa ny fanoherana ny rivotra kosa ...Hamaky bebe kokoa »
Fampidirana ny tombon-tsoa azo avy amin'ny sivana ho an'ny mpanadio banga
Fotoana fandefasana: Jul-14-2021
Mino aho fa tsy hahafantatra ny teny hoe vacuum cleaner ianao. Vacuum cleaner dia afaka mamaha olana maro amin'ny fiainana. Satria misy mpanadio banga, mety kokoa ny fanadiovana ny trano. Tsindrio fotsiny ny bokotra iray, izay misy vovoka apetraka, segondra vitsy dia afaka mamadika ilay toerana maloto tany am-boalohany ho shi ...Hamaky bebe kokoa »